१२ बर्षसम्म ससुराले बुहारीलाई बच्चा जन्माउन रोक लगाउनुको कारण थाहा पाउँदा दुनियाँ चकित ! – Online Nepalaja
February 5, 2021 185
अञ्जलि राई । बुढेसकालमा सबैजना आफ्ना नातिनातिना खेलाउने सपना देख्छन् । बुढेसकालमा उनीहरु नातिनातिना खेलाउनु खुशी र सम्पत्ती भन्दा धेरै माथि मान्दछन् ।
तर भोपालमा यस्ता वृद्ध हुनुहुन्छ जसले नाति–नातिनाहरुको जन्ममा निषेध गरेका छन् । त्यो युगल जोडीको बच्चा नहुनुमा बाबु दोषी रहेको खुल्न आएको छ । बच्चा नपाएकोमा उनले एक्लो छोरा र बुहारीलाई नाति–नातिना नजन्माउन दबाब दिनु नै प्रमुख कारण भएको खुल्न आएको हो ।
ससुराले यदि छोरा बुहारीले बच्चा जन्माए भने उनीहरू दुबैलाई उनीहरूको पैतृक सम्पत्तिबाट निकालिनेछ । विवाह गरेको सात बर्ष पछि पनि, बच्चाको खुशी नहुँदा दुखी बुहारी कुतुम्ब अदालतमा पुगेकी छिन् ।
उनले आफ्नो ससुरलाई सम्झाउन भनेर अनुरोध गरेकी हुन् । तर, ससुरालाई पटकपटक परामर्श पछि पनि विचार परिवर्तन गर्न मानेनन् । अब उनलाई अर्को परामर्शका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।
यो भोपालका सेवानिवृत्त अधिकारी परिवारको अनौठो घटना हो । विवाहको शुरुवाती वर्षहरूमा, बुहारीले आफ्नो ससुरा र श्रीमान्‌लाई समेट्ने कोशिस गरिन् तर त्यो समस्या सुल्झिएन । सामाजिक र पारिवारिक तनावबाट ग्रस्त बुहारीले अन्ततः सेप्टेम्बर २०२० मा कुतुम्ब अदालतमा आवेदन दिएकी थिइन् ।
उनले सल्लाहकार सरिता राजनीसँग कुरा गरेकी हुन् । डेढ महिनादेखि चलिरहेको सुनुवाई पछि पनि कुनै समाधान भेटिएन । परामर्शदाता राजनीले छोरा र बुहारीलाई छुट्टै घर लिन सल्लाह दिए तर पति आफ्ना बुबालाई छोड्न चाहँदैनन् । ससुराले पनि स्वीकार्न तयार छैनन् । धेरै वर्ष पहिले सासुको मृत्यु भइसकेको थियो ।
जब परामर्शदाताले सेवानिवृत्त अधिकारीलाई बोलाए, उनले तर्क गरे, ‘यदि बुहारीको बच्चा भयो भने उनीहरूले मेरो हेरचाह गर्दैनन् । मलाई वृद्धाश्रम पठाउने छन् । छोराको बच्चाको जन्म भएको छैन ।
छोरा र बुहारीको पहिलो कर्तव्य भनेको मेरो सेवा गर्नु हो । उनीहरूले मेरो मृत्यु पछि बच्चा जन्माउन सक्छन्। यदि बुहारीले बच्चा चाहान्छ भने, त्यसले मेरो छोरासँग सम्बन्धविच्छेद गर्न र अर्को विवाह गर्न सक्छिन् ।’
पहिलो परामर्शदातामा, पतिले भने, ‘बुबा कुनै बच्चा चाहँदैनन् । यदि हामीले यो गर्‍यौं भने, तिनीहरूले हामीलाई उनीहरूको सम्पत्तिबाट निकालिदिनेछन् ।’ श्रीमान् एक निजी कम्पनीका कर्मचारी हुन् । परामर्शदातामा बुहारीले बच्चा जन्माए पछि पनि उनी आफ्नो ससुराकै सेवा गर्ने अदालतमा शपथ पत्र दिन तयार रहेको आश्वासन दिएकी थिइन ।
प्रत्येक बुबा आफ्नो छोराले आफ्नो पुस्तालाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्, तर यो कुरा एकदम फरक छ । पहिलो पटक, त्यस्ता वृद्ध देखा परेका छन, जसले आफ्ना छोराबुहारीलाई आफ्नो स्वार्थको लागि बच्चा नजन्माउन दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बुबाले उसलाई डराउनुपर्दैन भनेर वर्णन गर्नुपर्दछ । कानून उनीहरूको लागि बनेको छ ।–रेणु शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भोपाल
वृद्धहरूमा असुरक्षा बढेको छ । यस्तो व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तन हुन थाल्छ। सोच परिवर्तन हुन थाल्छ। यस अवस्थामा छोराले आफैले निर्णय गर्नुपर्नेछ।–डा.राहुल शर्मा, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, भोपाल
कुनै पनि व्यक्तिले भरण–पोषणको लागि अदालतमा सीआरपीसीको धारा १२५ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यसमा अभिभावकहरू पनि समावेश छन् । यदि अदालत चाहन्छ भने, यसले धारा १२८ अन्तर्गत अन्तरिम भरण–पोषणका लागि आदेश जारी गरेर राहत प्रदान गर्न सक्दछ ।–केएल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च अदालत, इन्दौर
Prevसासु बुहारीको बितेको पलले झनै दुनियाँको मनै रुहाउने भो ? बिचरा राहुलको आमाले सम्हालिन सकिनन् आसु ( भिडियो )
Nextप्रधानमन्त्री ओलीले बोल्दाबोल्दै आँसु झारे (भिडियोसहित)
श्वेताले निर्माण गरेको भनिएको माझी बस्तीको वास्तविकता यस्तो, माझीहरुको चि’त्कार, कि ऋण तिरिदेउ, नत्र घर फिर्ता लैजाउ (भिडियो हेर्नुस्)
विदेशबाट आएका श्रीमानले कमाएको पैसा खोजेपछी घर बाट हिडेकी श्रीमती को श’ व नारायणी नदीमा भेटियो (भिडियो)
एसईई परीक्षामा व्यापक परिवर्तन, अब कसरी हुन्छ परीक्षा ?
फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा… (3183)
क्यामेरामा रेकर्ड नभएको भए कसैले पत्याउने थिएन यो घटना, जान्नका लागी भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस (2845)
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1467)
लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम (1054)
‘मेरो बुढीको गो’प्य अं’गको फोटो त्यो मान्छेको मोवाईलमा कसरी गयो’, भेटियो थुप्रै प्रमाण (भिडियो) (608)
सुतेका थिए उनि….. तर उठ्दा विश्वभर भाइरल भैसकेका थिए (तस्विर सहित) (456)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (410)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (388)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (372)
पूरा हेर्नुहोस मात्र9लाख 99 हजार मा घर बिक्रीमा (342)
श्रीमानको साथ नपाउँदा-नपाउँदै पनी भँडा माझेर आमाले हुर्काएका कन्चनको यस्तो हालात (हेर्नुस भिडियो)
आज बुधबार पनि बढ्यो सुन र चाँदीको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
१७ वर्षीया किशोरीको बयान : फेसबुकमा कुरा भएर गेष्ट हाउस पुर्यायो, कोठामा पुग्नासाथ थालिहाल्यो